I-Numero 30 (Phezulu) - I-Airbnb
I-Numero 30 (Phezulu)
Istudiyo esinefenisha futhi esizimele sabantu abangu-2, phezulu endlini yabadobi eseduze nolwandle, esendaweni ethulile futhi engokoqobo yase-Peniche.
Kulungele ukuhamba ngezinyawo noma ngebhayisikili: Eduze nemaphakathi ledolobha, itheku namanye amasevisi kanye namabhishi amaningi anesihlabathi.
Indawo ilungele imidlalo yasemanzini (ukutshuza emanzini, i-kitesurfing) noma ukudoba.
Ibhishi lase-Supertubos, lapho kuvela khona isiteji se-World Surf League, lingamakhilomitha angu-5.5, futhi isiqhingi esihle sase-Baleal singamakhilomitha angu-5.5.
Indlu isanda kulungiswa futhi inakho konke ukunethezeka okudingekayo ukuze uhlale kahle. Futhi kuyikhaya lethu leholide.
4.73 · 115 okushiwo abanye
Indawo ezungeze idolobha elikhulu inokuthula. Indlu ingamamitha angu-100 ukusuka ebhishi yasendle kanye namatshe e-Viaya. Yindawo ehlukile yemivubukulo lapho ungathatha khona ukuhamba ngezinyawo futhi ujabulele izilwane eziphelile nezitshalo. Futhi iyindawo enhle yokudoba (inhlanzi, ama-seashells, i-octopus...).
Indawo ezungeze idolobha iseduze nemaphakathi ledolobha nokuphila okuhlaba umxhwele kwale peninsula enhle ngenkathi uhlala eduze namanye amasevisi (izimakethe ezinkulu, imakethe kamasipala, izindawo zokudlela, ama-bar...) kanye namabhishi okutshuza, i-kite surfing, i-snorkeling... Itheku,
hhayi kude, i izokuvumela ukuba ufinyelele iziqhingi ezinhle zase-Berlengas.
Sizotholakala (uma ufisa) ngocingo noma nge-imeyili futhi ngezinye izikhathi ngisho nangesayithi, phakathi nokuhlala kwakho, nganoma yimiphi imibuzo futhi sikusize ube neholide elingcono kakhulu.
I-Peniche yindawo esihlala kuyo njalo futhi siyazi amacebiso nezindawo ezinhle.
Singakuthinta kalula nabantu bendawo uma ufisa.(izifundo zokutshuza emagagasini, uhambo...).
Sizotholakala (uma ufisa) ngocingo noma nge-imeyili futhi ngezinye izikhathi ngisho nangesayithi, phakathi nokuhlala kwakho, nganoma yimiphi imibuzo futhi sikusize ube neholide eli…
Inombolo yepholisi: 97301/AL